ကွတ်ကီး - Rikoooo
Rikoooo ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် cookies များကိုစီမံခန့်ခွဲကိုဘယ်လို
ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်သင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်, ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖြတ်ပြီး cookies နဲ့ဆင်တူ tools တွေကိုသုံးပါ။ ဤမူဝါဒကျွန်တော်အဘယ်သို့ရှင်းပြသည်။
ကွတ်ကီးသငျသညျပထမဦးဆုံး site တစ်ခုသို့မဟုတ်စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်သည့်အခါ website တစ်ခုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုပေါ်တွင်တင်ရသောသေးငယ်တဲ့စာသားကိုဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ cookie ကိုသင်လည်ပတ်လာမယ့်အချိန်သင့်ရဲ့ device ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်, ဝက်ဘ်ဆိုက်, သို့မဟုတ်အခြားက်ဘ်ဆိုက်ကကူညီပါလိမ့်မယ်။ web beacons သို့မဟုတ်အခြားအလားတူဖိုင်တွေလည်းအတူတူပါပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီလမ်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းသောသူအပေါင်းတို့သည်ဖိုင်များကိုရည်ညွှန်းဖို့ဤမူဝါဒအတွက်ဝေါဟာရကို "cookies များကို" ကိုအသုံးပြုပါ။
cookies တွေကိုအစေခံအများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့က, သင့်ရဲ့ username နှင့်ဦးစားပေးမှတ်မိကြှနျုပျတို့၏ website ဖျော်ဖြေနေသည်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြှနျုပျတို့သညျမှအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်ကိုယုံအကြောင်းအရာအကြံပြုခွင့်ပြုပါရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။
အချို့သော cookies များကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဆံ့ဥပမာ - အဘို့, သင်၌ logging အခါ, တစ်ဦး cookie ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်သိုလှောင်ပါလိမ့်မယ် "ငါ့ကိုအောက်မေ့" ကိုကလစ်နှိပ်ပါလျှင်။ အများစုမှာ cookies တွေကိုသင်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းမည်မဟုတ်ခြင်း, အစားထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူများအမှာရောက်လာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုဖို့ကိုမည်သို့အဖြစ်ပိုပြီးယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ယေဘုယျတည်နေရာပါလိမ့်မယ်။
Rikoooo cookies များကိုဘယျအရာမျိုးကိုသုံးပါသနည်း?
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookies များကိုလေးခုကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအထိလုပ်ဆောင်:
မရှိမဖြစ် cookies တွေကို
တချို့က cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သော cookies များကိုကျွန်တော်တို့ကို subscriber များအားဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သူတို့ subscription ကိုသာစာမျက်နှာများကို access လုပ်နိုင်စေရန်ခွင့်ပြုပါ။ တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူသည်ဤ cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့ opts လျှင်, အသုံးပြုသူစာရင်းသွင်းခြင်းမှသူတို့ကို entitles သောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါနှင့် website ကို performance ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့တခြား cookies များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချ။ ဒါဟာငါတို့ဖြေရာယဇ်ကိုစိတ်ကြိုက်အလျင်အမြန်ပေါ်ထွန်းသည်ဟုမဆိုပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်နှင့်ပြုပြင်တာတွေကအရည်အသွေးမြင့်အတွေ့အကြုံကိုပေးခွင့်ပြုပါတယ်။ ဥပမာကျနော်တို့စာမကျြနှာအကြားဆက်သွယ်ထားသော၏နည်းလမ်းအထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး, အချို့စာမျက်နှာများကိုအမှားမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရန်သောစာမျက်နှာများကိုရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သောခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့စွမ်းဆောင်ရည် cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ပေလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်ပြီးသင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ကြောင်းဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်ထို site န်ဆောင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြဤ cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ပေလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကိုအသင့်ရဲ့ဦးစားပေးမှတ်မိဖို့ခွင့်ပြုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, cookies တွေကိုသင့်ရဲ့ username ကိုသင် site ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအခါတိုင်းစာရိုက်၏ဒုက္ခကိုကယ်တင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသင်လော့ဂ်သည့်အခါမြင်ချင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာထုတ်ဝေအဖြစ်သင့်စိတ်ကြိုက်ဦးစားပေး, မှတ်မိသေးတယ်။
ငါတို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောသင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်ရှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ခွင့်ပြုအဖြစ်မြှင့်တင်ရန်န်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို cookies များကိုအသုံးပြုပါ။
Behaviourally လျာထားသော Advertising ကြော်ငြာကွတ်ကီး
Rikoooo နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာရှင်များငါတို့သည်သင်တို့နှင့်သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြော်ငြာများအားဖြင့်သင်တို့ကိုအစေခံရန် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျ Rikoooo.com အပေါ်သို့မဟုတ်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်လူတွေအတွက်မော်တော်ကားပေါ်ဆောင်းပါးအတော်များများဖတ်ပါလျှင်ဥပမာ, လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သူသင်ဤခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်အခြမယ်နှင့်၎င်း၏လေယာဉ်ကြော်ငြာများအားဖြင့်သင်တို့ကိုဝတ်ပြုကြလော့။ သငျသညျ Rikoooo.com အပေါ်နှငျ့သငျသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခြားက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်ဤအကြောင်းကြော်ငြာများကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့နေသောကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာရှင်များကိုပြောပြကြဘူး။
အခြားမည်သူမဆို Rikoooo ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ပါသလား
ကြော်ငြာရှင်များတခါတရံလျာထားသောကြော်ငြာခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြော်ငြာသူတို့သင်ယခင်က Rikoooo.com ရန်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများအားဖြင့်သင်တို့ကိုတင်ဆက်ဖို့သွားရောက်ခဲ့ကြပြီက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကြမယ့်ပရိုဖိုင်းကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့အကျိုးစီးပွားပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအသုံးဝင်သည်ကယုံကြည်ကြသည်။ သငျသညျဥရောပသမဂ္ဂတွင်အခြေစိုက်ကြသည်နှင့်ကြော်ငြာရှင်များ cookies များကိုဤအမျိုးအစားများကိုသုံးပါသို့မဟုတ်သူတို့ကိုလကျခံဖို့မရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုလျှင်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး http://www.youronlinechoices.eu။ သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အခြေခံနှင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုလျှင်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး http://www.aboutads.info/choices/.
ငါတို့သည်လည်းအထက်ပါလေးအမျိုးအစားထဲသို့ကျကြောင်း cookies တွေကိုအစေခံရန်တတိယပါတီများကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကုမ္ပဏီအများအပြားကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့ကိုကြှနျုပျတို့၏ website အသွားအလာစောင့်ကြည့်အထောက်အကူပြုရန် Google Analytics မှသုံးပါ။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ကိုအပေါ်လိမ်လည်လှည်သို့မဟုတ် Non-လူ့အသွားအလာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကိုကူညီ cookies တွေကိုအစေခံရန်တတိယပါတီများကို enable ပေမည်။ ကျနော်တို့သည်လည်းငါတို့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မူပိုင်ခွင့်မူဝါဒနှင့် site ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလိုက်နာမှုတိုးတက်အောင်, စျေးကွက်သုတေသန, ဝင်ငွေခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့တတိယပါတီ cookies များကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
website တစ်ခုအသုံးပြုသူပိတ်ပင်တားဆီးမှု cookies များကိုနိုင်သလား?
ကျွန်တော်အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, cookies များကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲကအများဆုံးရရန်ကူညီပေးသည်။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ဝင်ရောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ဆက်လက်အသုံးပြုပုံကိုသင် cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးဖှဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည့် overlay ကိုမြင်ကြပြီသငျ့သညျ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကျင့်ကိုကျင့်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ငါတို့က်ဘ်ဆိုက်၏ cookies များကိုငြင်းပယ်ရန်သင့် web browser ကိုသတ်မှတ်ထားပေးပါ။
သငျသညျ cookies တွေကို disable ဖို့ရွေးချယ်ကြပါလျှင်, သင်တို့၏ website အချို့ကဏ္ဍများကိုစနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးကွောငျးတှေ့စေခြင်းငှါသတိရပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များရှိမရှိနှင့်ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်အတွင်းလင့်များသို့မဟုတ်ကြော်ငြာများမှတဆင့်မဆိုကလစ်အတည်ပြုရန်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်တစ်ခုတည်း, မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး-ထူးခြားတဲ့ "ကို web Beacon pixel" ပါဝင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေး, ငါတို့အီးမေးလ်များသူတို့ကိုလက်ခံရရှိဆက်လက်ရန်ဆန္ဒရှိဖွင့်ကြဘူးသူကိုအသုံးပြုသူများကကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုနေပါသည်ရှိမရှိ query မှအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းများမှာကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များဖြစ်သောအဆုံးအဖြတ်အပါအဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါစေခြင်းငှါ, နှင့်၎င်းတို့၏ကြော်ငြာပေါ်နှိပ်လိုက်ကြမည်မျှအသုံးပြုသူများသည်စုစုပေါင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ကြော်ငြာရှင်များအကြောင်းကြားရန်။ သငျသညျအီးမေးလ်ကိုဖျက်ပစ်သောအခါ pixel ဖျက်ပါမည်။ သင်သည်သင်၏ကိရိယာကိုဒေါင်းလုဒ်ခံရဖို့ကတော့ pixel ဆန္ဒရှိဘူးဆိုရငျ, သငျသညျမဟုတ်ဘဲ HTML ကိုထက်လွင်ပြင်စာသားထဲမှာငါတို့ထံမှအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိရန်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။